Endri-pankalazana :: Mety haverina amin’ny fetin’ny Repoblika ny harendrina - ewa.mg
News - Endri-pankalazana :: Mety haverina amin’ny fetin’ny Repoblika ny harendrina
L’article Endri-pankalazana :: Mety haverina amin’ny fetin’ny Repoblika ny harendrina est apparu en premier sur AoRaha.
Firehetana tetsy manarintsoa :: Kilan’ny afo ireo trano enina niaraka tamin’ny fiara sy môtô
Nitrangana hain-trano indray, teny Manarintsoa Anatihazo Isotry, omaly vao maraim-be. Ravan’ny afo ny trano hazo enina tafo niaraka tamin’ny entana tao anatiny. May ihany koa ny môtô roa sy bisikileta telo ary fiara roa efa tsy miasa intsony. Nieren-doza ireo tompontrano. Soa fa tsy voakitika ny trano hafa teo amin’ny manodidina. Ny mponina teny antoerana no niara-nisalahy namono ny afo teo am-piandrasana ny sampana mpamonjy voina. Tonga teny ihany koa ny mpitandro filaminana. Vao tsy ela no nisy haintrano tahaka izao teny Manarintsoa Isotry. Mifanakaiky amin’ireo trano am-polony nirehitra, tamin’ny 11 jona lasa teo, ireto tra-doza omaly ireto. Olona maromaro mpihavana, samy manana orinasa kely fanamboarana kiraro sy paoketra vita amin’ny hoditra, no mipetraka ao amin’ireo trano enina tafo. Tamin’ny dimy ora maraina teo ho eo no niantomboan’ny loza. Nampiitatra ny firehetana ny trano hazo sy ny fisian’ny entana maro tao an-trano. Afon-tsaribao “Tombanana ho avy tamin’ ny afon-tsaribao tao an-tranon’ ny olona nahandro sakafo maraina no niavian’ny firehetana. Hoditra nalona tao anaty rano sisa no avotra tao amin’ilay orinasa kely lasibatra. Simba ny entana efa vita rehetra”, hoy ny tompon’andraikitra iray eny amin’ny fokontany Manarintsoa. Matetika ny hain-trano, indrindra ireo nahamaizana trano hazo tahaka izao teto an-drenivohitra, tao anatin’ny volana sy andro vitsy izay. Trano dimy amby roapolo no ravan’ny afo teny Anosibe Mandrangobato I, tamin’ny harivan’ny talata teo. “Fanindroany izao ny haintrano tety aminay, tao anatin’ ny roa volana monja. Tsy maintsy hisy ny fanentanana hataonay amin’ny tokony hitandreman’ny olona ho fisorohana ny loza”, araka ny nambaran’ny tompon’ andraikitra eny amin’ny fokontany Manarintsoa hatrany. L’article Firehetana tetsy manarintsoa :: Kilan’ny afo ireo trano enina niaraka tamin’ny fiara sy môtô est apparu en premier sur AoRaha.
Ny harivan’ny alahady 16 jona teo izay fotoana somary naharatsy ny andro ka niteraka rivotra sy orana, dia zazalahy iray eo amin’ny 05 taona teo no main’ny herinaratra tamin’ity toeram-pilalaovana « Auto-Tamponneuse », teo akaikin’ny lapan’ny tanana. Niaraka tamin’ny zokiny ity zazalahy kely main’ny herinaratra ity nandritra izany, ka ny fahitan’ny zokiny azy nihindritsindritra tao anatin’ilay fiara kely no nanaitra azy. Niezaka nisintona azy ny zokiny noho ny fahatsapany fa herinaratra tamin’ny fiara kely mifandondona no nahavoa ny zandriny, ka teo am-pisintonana azy iny izy dia niara-nipitika izy roa lahy. Tsy nahatsiaro tena ity zazalahy 05 taona taorian’izay ary nentina haingana teny amin’ny hopitaliben’i Toamasina notsaboina. Avotra soamantsara ny ainy, tsy nisy fiantraikany tamin’ny fony sy ny ati-dohany koa ilay herinaratra, fa ny retsika amin’ny fihetsehana amin’ny vatan’ilay zazalahy no nisy voan’ilay herinaratra izay miteraka fahalemena amin’ny vatany ankehitriny. Mitaraina noho ny tsy fandraisana andraikitra an’ilay tompon’ny « Auto-Tamponneuse » ny fianakavian’ity zazalahy main’ny herinaratra ity, na ny fitondrana ilay zaza teny amin’ny hopitaly, na ireo fanafody marobe tsy maintsy novidiana, na ny famangiana fotsiny ihany aza, tsy mba nataon’izy ireo akory hatramin’izao. Efa nandray ny fepetra mikasika ity toeram-pilalaovana eo anoloany ity ny tompon’andraikitry ny kaominina sy ny prefektiora, ka efa nasaina niala avokoa izy ireo amin’izao ; izy ireo izay efa nipetraka teo amin’ity toerana manoloana ny lapan’ny tanana ity hatramin’ny fialan-tsasatry ny paska lasa teo. Raha ny angom-baovao anefa dia io fialan-tsasatry ny paska io ihany no fotoana tokony nijanonan’izy ireo teo, fa noho ny kolikoly nataon’ny tompony tamin’ny ekipan’ny ben’ny tanana naato dia izy ireo nitohy sy lasa tompon-toerana teo anoloan’ny lapan’ny tananan’i Toamasina io. Malala DidierL’article Toamasina : Zaza main’ny herinaratra, tamin’ny kilalao « auto-tamponeuse » a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Mbola mety misy ihany ve, sanatria, ny ankifonofono amin’izao ady mafy amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao? Nahabe resaka sy nampiaka-peo ny sasany talohaloha teo, ohatra, ny amin’izay hoe fangaraharan’ny fitantanana ny famatsiam-bola sy ny fanampiana avy amin’ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombona antoka. Soa ihany, efa nisy ny tatitra. Mbola hisy ihany ny mila kisa? Ary ny amin’ny ady mivantana amin’ny valanaretina? Tsy ilaozan’izay tsy mahazo resaka any ho any… Na ny ny momba ny tsimokaretina Conoravirus, na izay atao sy fomba isorohana azy ary iadiana aminy. Na ny fanefitra sy ny fanafana amin’izany aza, mbola mampanontany tena ny sasany: mahomby sa tsia? Tsy ampy ny fanazavana sa misy ny tsy mahazo resaka na minia tsy miraharaha? Tsy vitan’izany, eny ho eny ihany, ohatra, ny tsy ma­naraka fepetra. Tsy mety ho tan-dalàna? Misy hatrany ny tsy manao aron-tava, tsy manasa tanana matetika. Tsy misy miraharaha firy izay elanelana iray metatra eny an-dalambe, an-tsena… Inona ny andrasana, rahoviana vao hahatsiaro tena? Efa iaraha-manaiky sy miaina isan’andro izao fa tsy hita maso ny fahavalo, tsy mifidy olona, mamono… Amin’izany, misy ihany ny kihonohono, hanamarinan’ny sasany tena amin’ny hevi-disony, ny fomba fijeriny, ny toetra amam-pomba ratsiny. Tsy marina, hono, ohatra, ny tarehi­marika mivoaka. Mety ho marina izay fa misy ny marary mamonjy avy hatrany dokotera, ohatra, na antony hafa. Na izany aza, famendrofendroana sy fanakorontanana no be ao an-doha fa tsy fisorohana sy fialana ny kifonofono. Loza iray, loza roa: mbola misy ve tokoa ve ny ankifono­fono, hany ka mandaitra amin’ny sasany kihono­hono… ma­mono? Mandreraka ny hafa tsinona, mandemy, mana­kivy, manakorontana aza. Misy ny maty ho azy amin’izany, sana­tria? Aleo mitandrina izay lazaina, mandinika sy mamaka­faka izay re. Mamono ny ankifonofono sy ny honohono amin’ity ady anaty akata… aretina. “Aza misoka-bava raha tsy azonao antoka fa tsara no ho ny fanginana izay holazainao”, hoy ny ohabolana arabo izay.Rafaly Nd.L’article Ankifonofono, kihonohono… mamono a été récupéré chez Newsmada.
Manao ny ezaka rehetra mba hahazoana ny fankatoavan’ny Kaonfederasiona afrikana amin’ ny taranjana baolina kitra (CAF) amin’ny kianja any Barikadimy (Toamasina) ry zareo ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Fepetra fototra hahafahana mandray ny lalao iraisam-pirenena hampiantranoan’ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea ny Elefanta Ivoriana io fankatoavana io, mandritra ny lalao miverina hatao eto amintsika ao anatin’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN. Hiankina amin’ny fisokafan’ ny sidina iraisam-pirenena miditra eto Madagasikara no fotoana hahatongavan’ny ekipan’ny CAF, izay hanome fankatoavana na tsia an’ izany kianja any Barikadimy izay, raha ny nambaran’i Victorien Andrianony, filoha vonjimaikan’ny FMF. Maromaro ireo teboka takian’ ny CAF fahatomombanana amin’ io kianja io: ny lafiny fandriampahalemana, ny efitrano fisoloana akanjo ho an’ireo mpilalao sy mpitsara, ny fahazavan’ny kianja amin’ny lalao hatao amin’ny alina, ny fahalalahan’ny lalana mamonjy ny kianja ary ny hamaroana sy halalaky ny vavahady fidiran’ny mpijery. Nohamafisin-dRazafimamonjy Jocelyn, mpikambana ao amin’ny komity mpanatanteraky ny FMF, fa « mila manaraka tsara an’ireo fanamarihan’ny CAF ny firenena izay mitaky fankatoavana kianja, mialoha ny hanomezany ny fankatoavana ». Volana maromaro izao no nisian’ny asa fampanaraham-penitra iraisam-pirenena ny kianjan’i Barikadimy. L’article Kianja baolina kitra :: Miandry ny CAF ny fankatoavana an’i Barikadimy est apparu en premier sur AoRaha.